अल्पमतमा परेपछि पार्टी निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्रीकाे अडान – Lokpati.com
सरकार नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेकपा अपराध प्रधानमन्त्री राशिफल केपी शर्मा ओली प्रचण्ड पक्राउ अमेरिका
काठमाडौं, १४ फागुन। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अल्पमतमा परेपछि पार्टी निर्णय नमान्ने अडान लिएका छन्। बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफू विरुद्ध पार्टीमा ‘खेल’ खेलिएको आरोप लगाउँदै पार्टी निणर्य नमान्ने बताएका हुन्।
पछिल्ला दिनमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमहरु आफूविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा भएको भन्दै ओलीले सचिवालय बैठकमा आक्रोससमेत पोखेका थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनीतका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नाम सिफारिश भइसकेको बताएका छन्। सचिवालयले निर्णय लिनुअघि नै राष्ट्रियसभामा मनोनीतका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नाम सिफारिश भइसकेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयका सबै नेताहरुलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीति हुने राष्ट्रियसभा सदस्यमा मन्त्रिपरिषदले खतिवडालाई सिफारिश गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्। सचिवालयको निर्णय ढिलो भएको भन्दै राष्ट्रियसभामा मनोनीतका लागि डा. युवराज खतिवडाको नाम सिफारिश भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। निर्णय भइसकेको नाम परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उधृत गर्दै एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार राष्ट्रियसभा चुनावपछि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिबाट मनोनीतिका लागि खतिवडाको नाम सिफारिश गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका छन्। बुधबार सचिवालयले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सो कोटामा पठाउने निर्णय गरेपछि उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तर मनोनीतिका लागि भने खतिवडाको नाम गइसकेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति समक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि खतिवडालाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय भएको हो। सो विषय बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराएका हुन्।